मुकुन्द घिमिरे रत्नपार्क देखी क्लबहाउस सम्म - Katuwal
१४ भाद्र २०७८, सोमबार २२:२४	4,368 पटक-पढिएको
मुकुन्द घिमिरे, अर्थात् ‘मुकुन्दे’। यो नाम रत्नपार्कमा मात्र सिमित रहेन आजकल। त्यसो त उनको भनाई र गराईहरू पनि सिमितताको सिमा बाहिर पुगिसके। नेपाली राजनीतिको चक्काचौंधमा एउटा उर्वर नौजवान कसरी पिसिन्छ भन्नेको एउटा उदाहरण हुन् उनी। विविध कारणले राम्रै करिअर संभावना बोकेका नौजवान यतिखेर डिजिटल सामाजिक संजालका भाईरल कन्टेन्ट मात्र बनिरहेका छन्। त्यसैले भाईरल संजालमा सब्सक्राईबर, भ्यूज र मोनिटाईजेसनको गतिलो कन्टेन्ट बनिरहेका छन्। पछील्लो समय ‘मुकुन्दे’ बाट ‘मुकुन्दाई’ बनेका उनी हरेक युट्युबरका लागी ‘मनि’ झार्ने माध्यम हुन्। राजेश हमालको बिहे देखी अमेरिकी सहयोग/लगानी/दान स्पष्ट नखुलेको तर धेरै चर्चा पाएको एमसीसी सम्मका विषयमा उनका धाराप्रवाह टिप्पणीले धेरै युट्युबरलाई ‘मनि’को वर्ष गरिदिएको छ। त्यसैले उनलाई अतिथी बनाउन चाहनेको संख्या पनि कम छैन।
कुनै बेला रत्नपार्क गतिलो ‘पब्लिक स्पेयर’ थियो, मुकुन्दे त्यहीँ ‘मुकुन्दायण’ भन्दै रूख चढेर चिच्याउँथे। पछी फेसबुक र युट्युबमा आउन थाले। अहिले लकडाउनको समय लोकप्रियताको शिखरमा पुगेको ‘क्लबहाउस’मा उनको ‘ईन्ट्रि’ भएको छ। क्लबहाउसमा लकडाउनमा फुर्सतिला बनेका विश्वभर छरिएका नेपालीहरूले उनलाई धमाकेदार स्वागत गरे भन्दा हुन्छ। ‘मुकुन्दे’लाई धान्छ त क्लबहाउसले भनेर बहस नै चार पाँच घण्टा सम्म चल्यो।
मुकुन्द घिमिरेका तस्विरहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
मुकुन्द घिमिरेको विषयमा अनेकका अनेक धारणा हुनसक्छन्। मन पराउने पनि र मन नपराउने पनि जता पनि लर्को लामै हुनसक्छ। तर, उनी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन है नेपाली समाजका। उनी जस्तै अरू पनि छन्, उस्तै तरिकाले अमुक राजनीतिक दल वा नेताको पक्षमा उसरी नै कुर्लने। यो उनीहरूको स्वतन्त्रता हो तर सामाजिक मर्यादा र कानुनी व्यवस्था भित्रै बसेर उनी जस्तै जसले पनि आफ्नो विचार राख्न चाहिँ पाउनुपर्छ।
२०६५ मा मुकुन्द घिमिरे विषयमा ठूलै आलेखमा मैले जे कुरामा पुगेर बिट मारेको थिएँ, रत्नपार्कबाट फेसबुक, युट्युब हुँदै क्लबहाउसमा आईपुग्दा पनि त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै छ।
”प्रजातन्त्रका बा-रेमा कुरा गर्दा खुला बजारसँगै ‘फ्रि मार्केट प्लेस अफ आईडियाज’को पनि कुरा गरिन्छ। ‘मुकुन्दे’का टिप्पणीले ‘फ्रि मार्केट प्लेस’को प्रयोग त गरेको छ। स्वच्छन्दतातर्फ मोडिने उनका कुरा भिडतन्त्रतर्फ त लागिरहेको छैन? यसलाई फगत मनोरंजनको रूपमा मात्र लिन सकिएला? के यसलाई बरालिएको मान्छेको उटपटाङका रूपमा मात्र लिन सकिएला?”
मुकुन्द घिमिरे को विषयमा मैले २०६५ साल फागुन २४ गतेको अन्नपूर्ण फुर्सदमा लेखेको आलेख ‘ स्पीकर्स कर्नरका सदाबहार नेता’ पीडीएफमा यता पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागी यहाँ क्लिक गर्नुस्
अघिल्लो अनलाईन बुलिङ र ट्रोल बिरूद्ध कडा कानुन
पछिल्लो अष्ट्रेलियाले यसै साल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी ल्याउने, नेपाली आउन पाउलान्?